Shiinaha PASTEURIZATION / qaboojiyaha LINE soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |INCHOI
Mashiinka pasteurizer casiirka tunnel ee casiirka miraha / cabitaanka / cabitaanka
◆Qadkan wax-soo-saarku wuxuu qaataa habka daaqsinka.Ku habboon nadiifinta heerkulka hooseeya ee cuntada iyo cabitaannada sida miraha iyo khudaarta la shiilay, hilibka kulaylkoodu yar yahay, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, jelly, alaabta qasacadaysan, iwm.
Qalabku wuxuu ka samaysan yahay bir aan tayo lahayn oo tayo sare leh iyo qalab kontorool oo horumarsan.Waxay leedahay muuqaal qurux badan, hawlgal ku habboon iyo dayactir.waxay leedahay xoog-shaqo yar, shaqaale yar, is-xakameyn sare, iyo heerkulka si toos ah ayaa loo hagaajin karaa gudaha 98 ° C.Farqiga heerkulka u dhexeeya lakabyada sare iyo hoose waa yar yahay, tayada alaabaduna way fududahay in la xakameeyo.
Alaabtani waxay si buuxda ugu hoggaansantay shuruudaha shahaadaynta tayada, waa nadaafad iyo hufnaan, waana qalab ku habboon warshadaha habaynta cuntada.Qalabku wuxuu qaadaa suunka mesh-lakabka ah ee laba-lakabka ah, kaas oo si wax ku ool ah ugu cadaadinaya walxaha biyaha si buuxda, si ay walaxda si siman u nadiifiso.
Xawaaraha gudbinta suunka mesh waa la hagaajin karaa.Qalabku waxa uu ku qalabaysan yahay kursiga xagal pneumatic ah.Marka heerkulka gudaha jeermis dilaha hoos loo dhigo, uumiga si toos ah ayaa loo buuxinayaa.Marka heerkulka gudaha sterilizer uu gaaro heerkulka la dejiyay, si toos ah ayaa loo dami doonaa si loo badbaadiyo tamarta.Mashiinku wuxuu leeyahay sifooyinka xakamaynta heerkulka wanaagsan, waxtarka sare iyo badbaadinta shaqada.
Qalabku wuxuu ku qalabaysan yahay bamka wareegga si loogu oggolaado biyaha nadiifiyaha ku jira inay qulqulaan si loo hubiyo heerkulka biyaha isku midka ah.Jirka taangiga dibadda waxaa la siiyaa lakabka daboolka si loo yareeyo luminta kulaylka una badbaadiyo tamarta.Meesha uumiga ayaa laga bixiyaa qeybta sare ee aaladda, gaaska xad-dhaafka ah ayaa laga sii daayaa dekedda qiiqa.Daboolka sare ayaa kor loo qaadi karaa si loo nadiifiyo gudaha jidhka, iyo dhammaadka hoose waxaa la siiyaa meel bullaacad ah si ay u daadiyaan wasakhda ku habboon iyo nadiifinta.Ka dib marka walxaha la nadiifiyo, waxaa loo qaadaa qaboojiyaha iyada oo loo marayo suunka mesh si loo qaboojiyo dhammaan habka daaqsinka.
Biyaha heerkulka dabiiciga ah ama qaboojiyaha qaboojiyaha
Nidaaminta xawaaraha aan tallaabo lahayn
380V/ la habeeyey
Mashiinkan waa la habeyn karaa
Qalabku wuxuu qaataa preheating-sterilization-hor-qaboojinta-qaboojinta afar qaybood iyo buufinta iyo nadiifinta walxaha afarta jiho ee kor, hoos, bidix iyo midig, xawaaraha jeermiska ee alaabta kala duwan waa ka duwan yahay, heerkulka qalabku wuxuu noqon karaa mid aan loo baahnayn. dejinta, xakamaynta tooska ah, Ilaali heerkulka joogtada ah iyo duubista tooska ah;
Mashiinka daaqsinka waxa uu ka samaysan yahay darajada cuntada 304 bir aan daahin marka laga reebo xajiyeyaasha iyo matoorada, suunka mesh waa qalabka ugu fiican Shiinaha.
● Mashiinku wuxuu ka samaysan yahay bir aan lahayn, oo waafaqsan calaamadda CE ee Yurub;
● Heerkulka pasteurizing waa lagu hagaajin karaa gudaha 98C°.heerkulkuna waa isku mid si loo hubiyo tayada badeecada oo joogto ah.
● Mashiinku waxa uu isticmaalaa gudoomiye u qalma, xawaaraha qaadida tallaabo saxan sare leh;
Qaybaha muhiimka ah ee mishiinka waxaanu dooranaa qaybo qalabaysan oo tayo leh oo shahaado ah si loo hubiyo tayada iyo cimri dhererka mishiinka;
● Kantaroolka kombuyuutarka PLC, hawlgalku waa mid sahlan, ku habboon oo dabacsan;
● Badbaadinta shaqada, kordhinta wax soo saarka, hubi joogteynta dhadhanka iyo midabka alaabta, oo ilaali nafaqooyinka asalka ah;
● Waxaad u dooran kartaa PP, mesh SS, saxan SS inay noqdaan alaabadaada ku salaysan alaabtaada.
Heerkulka iyo xawaaraha waxaa lagu dejin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha habraaca.
◆ Isticmaal kuleylka uumiga si aad u badbaadiso tamarta.
◆ Heerkulka jeermisku waa isku mid, tayada alaabtuna waa isku mid.
◆Madhalayska heerkulka-hooseeya gudaha 98 ℃, nafaqooyinka cuntada lama baabi'in doono, dhadhanka iyo midabka asalka ahna waa la ilaalin doonaa.
◆Mashiinku si habsami leh ayuu u shaqeeyaa, suunka gudbinta ee mesh-ka (saxanka silsiladda) waxa uu leeyahay awood sare, dabacsanaan yar, ma fududa in la habeeyo, si fududna loo ilaaliyo.
◆ Qaboojiyaha ayaa lagu dari karaa si ay alaabta ugu qaboojiso heerkulka qolka oo si degdeg ah u geli habka xiga.
Mashiinka dhalo / qasacadaha daaqsinka
Cabbitaan dhalada/dasacadaysan ka dib buuxinta
10 ~ 60 daqiiqo
≤ 98℃ la hagaajin karo
Kuleylinta korontadu / kululaynta uumiga
100 ~ 5000 dhalo/saacaddii
Mashiinka pasteurization bacaha bacaha
Cunto bacaysan ka dib buuxinta
Daawada labajibbaaran ayaa loo isticmaalaa aqoon-is-weydaarsiga cidhiidhiga ah kaas oo boosku xaddidan yahay.Mishiinkani wuxuu badbaadin doonaa booskaaga aqoon-is-weydaarsiga oo dhammaan shaqada awoodda daaqsintu waxay la mid tahay midka caadiga ah.
Si joogto ah u pasteurize baakidhka Jelly, iniin khardal ah, kaabaj la shiilay, caano, cunto qasacadaysan, xawaashka, hilibka iyo bacaha cuntada digaaga, gasacadaha, dhalooyinka, ka dibna si toos ah u qabooji, u qallaji oo ku shubaya kartoonada.
Hore: Qudaarta caleenta leh ee xididka ah laba hal meel oo lagu dhaqo xumbo hawo, khadka wax qabad ee fuuq-baxa
Xiga: MAASHINKA DHAQASHADA IYO BAASKIID/ DHALADA&KABADDA
Baakadaha dabacsan oo nadiifinta iyo qallajinta hawada (Bakin...